WordPress Ku Biirida Awood CMS | Martech Zone
Talaado, July 15, 2008 Isniintii, September 30, 2013 Douglas Karr
WordPress dhab ahaantii wuu isbeddelayaa codsi qoraal ah oo wuxuu u guuraa astaamo aan caadi ahayn oo qariya kuwa caadiga ah CMS. Runtii aad ayaan ula yaabay sida ugu dhakhsaha badan ee u cusbooneysiinta WordPress ay u imaaneyso iyo sidoo kale astaamaha xariifnimada ah ee lagu kordhinayo.
Hadda haddii ay sii wadi karaan baahida
Kani waa shaashadda aniga la iiga tagay markii aan isku dayay inaan soo dejiyo WordPress 2.6 saaka. Waa caadi, in kastoo… waan sugi doonaa.
Tags: WordPresswordpress 2.6cusbooneysiinta wordpress
Jul 15, 2008 markay ahayd 8:32 AM
Taasi waxay u badan tahay inay u badan tahay soo dejinno markiiba.
Hore ayaan u hagaajiyay tayda in kastoo 😉
Jul 15, 2008 markay ahayd 10:32 AM
Woohoo! Waan cusbooneysiiyay!
Jul 15, 2008 markay ahayd 9:29 AM
Waxaan jeclahay inaan maqlo wararka sidan oo kale ah. Waxaan u adeegsadaa WordPress sidii xalka CMS macaamiishayda badan.
Jul 16, 2008 markay ahayd 1:36 AM
Hi Douglas !, Runtii waan jeclahay bartaada internetka; inkasta oo aanan si sax ah isku goob ganacsi u ahayn, waxaan jecelahay inaan ka dhex akhriyo waayaha qofka jira, waana ku raaxaystaa inta badan macluumaadka. Waayahay, hadda waa kufilan tahay bogaadin :), maanta waxaan dhagsiiyey cinwaanka RSS ee qoraalkan si aan halkan u imaado oo aan u helo qalad, mana ahan markii ugu horreysay ee dhacday. Xidhiidhka RSS-ka ayaa u diraya feedburner ka dibna "wordpress-26-waa halkan", halka isku xidhka saxda ahi yahay "wordpress-evolving-to-a-cms-powerhouse". Ma aqaano inay wax ka tahay qaabeynta waxaad awoodi kartaa inaad beddesho.